गोल्डकपको वर्गीकरण आवश्यक छ - पाँच प्रश्न - साप्ताहिक
गोल्डकपको वर्गीकरण आवश्यक छ
माघ १९, २०७३
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष हुन्– नरेन्द्र श्रेष्ठ । एन्फालाई गति र एउटा निश्चित स्वरूप दिने प्रयासमा रहेका श्रेष्ठले मोफसलमा हुने गोल्डकपहरूलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । उनी यस्ता प्रतियोगितालाई ठोस स्वरूप प्रदान गर्ने प्रयासमा पनि छन् ।
मोफसलमा हुने फुटबल प्रतियोगिताहरूको योगदानलाई लिएर एन्फा के भन्छ ?
घरेलु फुटबलमा यस्ता प्रतियोगिताको आफ्नै महत्त्व छ । यसले फुटबलको वातावरण तयार पार्ने गरेको छ, तर सबै प्रतियोगिता व्यवस्थित छन् भन्न सकिँदैन । कतिपयले एन्फासँग स्वीकृति पनि लिएका छैनन् ।
यस्ता प्रतियोगिताको वर्गीकरणको चर्चा पनि छ नि ?
मोफसलमा हुने प्रतियोगिताको वर्गीकरण आवश्यक छ, यसमा एन्फाले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । कस्तो प्रतियोगिता हो, त्यो हेरेर ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ वर्गीकरण गर्नु पर्छ । त्यसैअनुसार एन्फाले पनि सुविधा दिन सक्छ ।
एन्फाबाट स्वीकृति लिएका प्रतियोगिता कुन–कुन हुन् ?
हामीले सबै प्रतियोगितालाई स्वीकृत दिन सक्ने स्थिति छैन। एन्फाबाट स्विकृति लिएर चलेका गोल्डकपमा आहा–रारा, सिमरा, उदयपुर, झापा, माइ भ्याली, बुढा सुब्बा, खप्तड गोल्डकपजस्ता प्रतियोगिता छन् ।
क्लब लाइसेनिङ र रणनीतिक योजनाले यी समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सक्छ ?
यी दुवै कार्यक्रम अब अनिवार्यजस्तै भैसकेका छन् । सुरुमा सुन्दा मात्र यस विषयमा फरक धारणा सिर्जना हुनसक्छ, तर यो असम्भव छैन । यी दुई कार्यक्रम लागू भएपछि प्रतियोगिता र क्लब दुवैले गति लिनेछन् ।
लिग फुटबल कहिले हुन्छ ?
चैतमा लिग फुटबल सुरु गर्ने योजना बनाएका छौं । यसपल्ट लिग सप्ताहन्तमा गर्ने र ६ महिनासम्म चलाउने योजना छ । बीचमा एकाध नकआउट प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गर्नेछौं । क्लब लाइसेनिङमा जति क्लब आउने छन्, त्यसैलाई लिएर लिग प्रतियोगिता हुनेछ ।
प्रकाशित :माघ १९, २०७३
खप्तड गोल्डकपको सान
चलचित्रका लागि सेन्सर आवश्यक छ ?
आफ्टर प्ले पनि आवश्यक
राजनीति गर्न कस्तो किसिमको योग्यता आवश्यक छ ?
थुतुनोलाई हरदम लगाम आवश्यक छ
सक्रिय जीवनशैली आवश्यक
पाँच प्रश्नबाट अरु
मार्केटिङ गर्न नजानेपछि कसरी चल्छ चलचित्र ? चैत्र १, २०७५
यसपटक इन्टिग्रेटी अफिसरको व्यवस्था छ कार्तिक ११, २०७५
हामी उपाधिको दावेदार हौँ भाद्र १७, २०७५
प्रत्येक खेलाडीको उद्देश्य पदक जित्नु हुन्छ श्रावण २३, २०७५
देखाउनकै लागि व्रत नबसौं श्रावण ७, २०७५
रञ्जित गजमेरसँगको सहकार्यबाट उत्साहित छु श्रावण २, २०७५
निर्वाचन सामान्य प्रक्रिया मात्र हो वैशाख ३०, २०७५
अवसरलाई प्रमाणित गर्नेछु वैशाख १६, २०७५
हाम्रा सबै खेलाडी लयमा छन् फाल्गुन २७, २०७४
ईपीएल र डीपीएलजस्ता प्रतियोगिताले नेपाली क्रिकेट चलिरहेको छ फाल्गुन २५, २०७४